NYI LYNN SECK 18+ DEN: ဇှောဂျီဖောင့်
Posted by NLS at 12/20/2007 02:10:00 PM
3 Responses to “ဇှောဂျီဖောင့်”
Thanks bro. Let me try it out.
where is safemode? pls can u explain me?
ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix said...
Safe mode ကို ဝင်ဖို့
၁၊ စက်ကို restart လုပ်ပါ
၂၊ black screen ပှေါပြီးတာနဲ့ function key F8 ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃၊ အဲဒီမှာ ပှေါလာတဲ့ မီနူးထဲက အပှေါဆုံးက Safe Mode ဆိုတာကို ရွေးပါ။
အဲဒီထဲရောက်မှ လိုအပ်တာကို လုပ်ပါ။